मान्छे कसरी 'जागरूकता' को बारे मा कुरा गर्न सक्छ र एकै समयमा प्रणाली को बनाए राखन को मदद गर्दछ? मार्टिन भिजल्याण्ड
तपाईं चेतनाको बारेमा कुरा गर्ने धेरै सुन्नुहुन्छ। कसैलाई गुरु खोज्छ; अरूले मनन गर्छन् वा अभ्यास गर्छन्; अरुले चर्च जान्छन् वा धर्म वा आध्यात्मिकताको केही रूपमा संलग्न हुन्छन्। ठूलो रहस्य छ कि अझै पनि नदी किनारा किनारा को किनारा मा जाने को जहाज मा आफ्नो जहाज सफा गर्ने कोशिश गर्दै छन्?
यदि तपाईं एकै साथ प्रणाली को बनाए राखन मा मदद गर्छन भने चेतना को बारे मा कसरि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? कुन प्रणाली? प्रणाली जुन पूर्णतया चेतना कम गर्न मा आधारित छ; प्रणालीमा हामी पनि 'समाज' शब्दको साथ संक्षेप गर्छौं। तपाईं कसरी समाजको चूहे दौडमा भाग लिन सक्नुहुन्छ? चेतनाको बोल्नु र आध्यात्मिकताको विभिन्न प्रकारको अभ्यास गर्नुहोस्, जबकि समाजले कुल चेतनालाई कमजोर बनाउँछ? के यो साँच्चै के के गरिरहेको हुनाले तपाईंको जहाज को किनारा राख्नको लागि समय छैन?
यस परिचयको साथ तपाईंले सोच्न सक्नुहुन्छ:केही कुरा सही छैन! म एक विश्वासी हुँ या म आध्यात्मिक हुँ र म जीवन को त्यो मनोवृत्ति को माध्यम ले दुनिया मा सुधार गर्न को लागि"। तर तपाईं सुप्रसिद्ध प्रणालीमा दासत्व र राजनीतिक नेताहरूको निर्भरतामा आधारित काममा जानुहुन्छ जुन तपाईले मतदान गर्न सक्नु भएको छ, आशा छ कि नयाँ चुम्बन टोली एकदम राम्रो हुनेछ। त्यसपछि अघिल्लो एक। "तर के तपाई Vrijland गर्न चाहनुहुन्छ? अराजकता? म आफ्नै मा कर तिर्न रोक्न तयार छु र म आफ्नै काम छोडेर जाँदैछु। त्यसपछि म सबै कुरा गुमाउँछु वा म जरिवाना र बेमेलको साथ दण्डित गर्दछु र म मेरो घरबाट बेवास्ता हुन सक्छु र म अब मेरो परिवारलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ।"।
मैले कसैलाई भनेका थिए जसले पेटेंट उल्लङ्घनको बारेमा एक प्रसिद्ध प्रिन्टर निर्मातासँग व्यापार विवादको परिणामस्वरूप एक टेक्सास जेलमा5वर्षको बारेमा खर्च गर्यो। यस विस्तारको व्याख्या बिना, यस जेल प्रणालीमा उनको अनुभव छोटो विवरणको वर्णन गर्न रोचक छ।
यस व्यक्तिले भने कि त्यहाँ यस जेलमा एक प्रकारको अराजकता थियो (केही हजार कैदीहरू), जसमा गार्डहरू आफैलाई कम वा कम व्यक्तिहरूलाई कैदीहरूका बीच अनावश्यक नियमहरूको पालन गर्न बाध्य भए। यदि तिनीहरू गर्म पानी चाहन्थे, तिनीहरूले सामूहिक रूपमा कामलाई जम्मा गरेर यो लागू गर्न सक्थे। उनले पनि संकेत गरे कि त्यहाँ कुनै हिंसा थियो, किनभने विभिन्न जनजाति र आदिवासी प्राचीनहरू बीचको एक समूहको कोड थियो (जसले आफूलाई जेलमा राखेको थियो)। यो आचरणको यो कोड, आचरणको कोडहरू सहित, आउँदै गरेको र कैदहरूमा जाने बाहेक।
वास्तवमा, उहाँले एक अराजकतावादी समाजको वर्णन गर्नुभयो जुन स्वतन्त्र रूपमा जेल प्रणालीको नियमहरू सञ्चालन गर्नुभयो; यस तथ्यको बावजूद यो सबै जेलको पर्खाल भित्र भित्रिएको थियो। यो अराजकतावादी रूप कानुन र नियमहरूमा आधारित थिएन, तर पारस्परिक सम्मान, सम्झौताहरू र विभिन्न जनजातिहरूको समाधानशील शक्तिमा आधारित थिएन। यदि समूहमा कसैले दुर्व्यवहार गर्यो भने, समूहले व्यक्तिलाई सम्बोधित गरेर यो हल गर्यो। वास्तवमा, तिनले तुलना गरे कि यो पुरातन भारतीय आदिवासीहरूसँग कसरी काम गरे। अमेरिकाको मूल बासिन्दा थिए जो भारतीय आदिवासीहरू थिए र पुलिस, कानुन, विद्यालय र जेलहरू बिना शान्तिपूर्ण जीवन बिताउँथे (कोलम्बस पुग्दासम्म)।
वास्तवमा, यस्तो जेल कुल समाजको एउटा सानो मोडल हो, जहाँ हामी झ्यालखाना बिना झ्यालखोलामा बाँचिरहेका छौं। दुर्भाग्यवश, धेरै अझै सम्म यो चिन्ता छैन, किनभने तिनीहरू आफूलाई "सुरक्षा टोली" को भाग हुन्। अरूले शिक्षामा काम गर्छन्, उदाहरणका लागि, जहाँ नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रशिक्षित गरिन्छ। 'गार्डर' मैले भनेको: नयाँ प्रबन्धक, प्रशिक्षक, बर्मिफ, कर निरीक्षकहरू, प्रहरी अधिकारीहरू, सैनिकहरू, एकाउन्टेंटहरू, वकीलहरू, र यति र त्यसो त। अरूले सरकारका लागि काम गर्ने निजी कम्पनीहरूको लागि काम गर्छन्, सेवाहरू वा उत्पादनहरू सरकारहरू वा अर्ध-सरकारहरू प्रदान गर्छन्। धेरैले घडीमा घडी वा घडीको स्थिति जुन जेलमा गुमेको व्यवस्थापनमा योगदान गर्दछ जुन हामी "समाज" भन्छौं। र अधिक मानिसहरू जसले त्यस गुंबदको केन्द्रीय टवरमा काम गर्दछ, थप त्यहाँ एकताको भावना हो कि हामी धेरै राम्रो गर्दैछौं। सबै पछि, पेय पार्टनर, पार्टनर र पार्टनरहरूमा, तपाईं मान्छे द्वारा घनिष्ठ हुनुहुन्छ जसले प्रणालीको लागि काम गर्दछ।
दुर्भाग्यवश, टेक्सनको जेलको उदाहरण त्यसैले कम हुन्छ र कम सान्दर्भिक छ, किनकि कैदी र गार्डरको अनुपात अझै पनि फरक फरक छ। केहि दर्जन गार्डहरु मा हजारौं कैदीहरु। हाम्रो समाजमा प्रायः धेरै रचनाकारहरू, प्रोजेक्टर्सहरू र नियम र कानुनका नियन्त्रकहरू र ती व्यक्तिहरू जसले आत्म-निर्मित प्रणाली र उनीहरूको स्थितिलाई प्रेम गर्न थालेका छन् (किनभने उनीहरूले यसको साथ जीवन बिताउँछन्)। एक अराजकतावादी विद्रोह जुन धेरै राम्रो-कार्यकारी आत्म-निर्भरतामा परिणत गर्दछ (जस्तै मैले पूर्व बोकेर मैले बोलेका थिए) भनिन्छ लगभग एक बहिष्कार विकल्प। हाम्रो समाज भनेको स्ट्यानफोर्ड (जिम्बार्डो) प्रयोगको क्रममा के भयो (जस्तै यहाँ).
यद्यपि तपाइँ आशा गर्न चाहानुहुन्छ कि यदि सबै धर्महरू, धर्म, आध्यात्मिकता, योग, गुरुङ र त्यसमा संलग्न हुन्छन् भने नदीबाट आफ्नो स्वच्छता र आध्यात्मिक जहाज ल्याउँदछ (जो ढोका तिर फैलिन्छ)। वा के तपाईं सोच्नुहुन्छ कि त्यहाँ abyss हुनेछैन? के तपाई सोच्नुहुन्छ कि एक मात्र तरिकाले समाजलाई कार्य गर्न सक्छ; के त्यो बाटो हामी देख्न सक्छौं? क्या तपाईं जान्दछन् कि हामी एक पुलिस अवस्था तिर बढ्दैछौं, जसमा स्वतन्त्रताको प्रत्येक रूप बढ्दै जान्छ र सबैलाई राज्यको कानुन र नियमको बढ्दो संकीर्ण गली भित्र नृत्य गर्नु पर्छ?
यदि मानिसहरू चेतना संग धेरै चिन्तित छन्, त्यसपछि त्यहाँ एक बाहिरी ठाउँ हो जुन केहि फरक मन पर्छ। यद्यपि, धेरै धर्मको झूटो आशाको लागि पतन हुन्छ र यो पनि थाहा छैन कि त्यहि धर्म समाजमा दलित (ध्रुवता) सिर्जना गर्ने उद्देश्य भनेको "प्रणाली" को अवधारणा हो अनि यसका साथै सनजस्तै उद्धारकर्ताको झूटो आशा राख्नु हो। । त्यो सॉसेजले उनीहरूको आफ्नै चेतना सक्रिय नगरी परिवर्तनको लागि आशा जारी राख्छ। 'सक्रिय' यो मा सही शब्द नहुन सक्छ। 'बाट व्यापार' शायद एक राम्रो वर्णन हो। यो उच्च समय हो कि अब जहाज को केबिन र डेक पोलिश (आध्यात्मिकता, बाइक्राम योग, ध्यान या प्रार्थना को माध्यम ले), तर हेलम को लागी र नदी देखि नदी देखि जहाज हटाउन को लागि । सायद यो उत्तेजक हो कि यदि तपाईं पत्ता लगाउनुहुन्छ कि नदी वास्तव मा उल्टी ले जान्छ।
प्रायः आध्यात्मिक धाराहरू केवल तपाईंले आफ्नो जहाजको केबिन वा डेकको लागि पिपिदिनुहुन्छ, तर तपाईंलाई तपाईंलाई आफ्नो जहाजलाई टाढा लिन र अन्धकारमा जाने को लागी प्रोत्साहित गर्दैन।
वैसे पनि चेतना के हो?
यो सन्दर्भमा यो उपयोगी हुन सक्छ जुन सबै भन्दा चेतनाको परिभाषा बनाइन्छ। Google अ Alphabet को रूप मा विज्ञान र कम्पनीहरु मानव मस्तिष्क मैपिंग मा धेरै मान्छे र पैसा खर्च गर्छन। Google को सीईओ रे कुर्जविल दृढतापूर्वक विश्वास गर्दछ कि चेतना हाम्रो खोप मा न्यूरोन्स को संख्या को एक परिणाम हो र यो कारण हो कि मानिस आफैलाई स्तनपान देखि अलग गर्दछ। यो हुनेछ किनकि मानिसहरु लाई नव-कोर्टसेक्स छ र यसैले मस्तिष्क कक्षहरूसँग चेतना स्थापित गर्न पर्याप्त मात्रामा छन्। विज्ञान र ठूला टेक कम्पनीहरूको लागि, जागरूकता यसैले मस्तिष्क गतिविधिको परिणाम हो। चेतनाको मेरो परिभाषा उल्टो हो: मानसिकता यो हो वा मानव बायो-अवतार चलाउन जोस्स्टिकमा।
बुझ्नका लागि, तपाईले पहिलो कुरा बुझ्नु पर्छ कि हामी बहु-सिमुलेशन अनुकरणमा बाँच्छौं। यसले आवाज "पुरा तरिकाले भगवान देखि अलग छ'(पागल) कानहरूमा, तर चिन्ता नगर्ने; यो पनि transhumanists र वैज्ञानिकहरु को लागि एक नै ठूलो टेक्नोलोजी कम्पनीहरु को लागि सुविधाजनक छ तपाईंलाई बताउन को लागि कि हामी एक सिमुलेशन मा रहछन। एलोन मास्क जस्ता मानिसहरू जस्तै (र एक कारणको लागि)। यद्यपि, उनीहरूले हामी एक धेरै विशिष्ट लुसिफरियन सिमुलेशनमा बस्छौं भनेर बताउँदैनन्।
यदि तपाईं सिमुलेसनको बारेमा मेरो श्रृङ्खलाको लेखहरू पढ्नुहुन्छ भने, तपाइँ कुन क्वांटम भौतिकी (यदि राम्ररी अनुवाद गरीरहनुभएको छ) पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हामी सिमुलेशनमा बाँच्ने विचारको पूर्ण प्रमाण प्रदान गर्दछौं। म यो महत्वपूर्ण व्याख्या प्रदान गर्दछु यो लेख। यो सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा यो वेबसाइटको मेनुमा जानुहोस् र मेनु वस्तु 'सिमुलेशन' चयन गर्नुहोस्।
"मा बस्न" वास्तवमा राम्रो विवरण होइन। हामी 'सिभिल इन' एक सिमुलेशन छैन: हामी पर्यवेक्षकहरू र खेलाडीहरू हुन्। हामी यो हो, जो थिए, जो सोलर मार्फत नियन्त्रण गर्ने (या पुरानो पीढीको लागि 'जोस्स्टिक') र हामी हेर्नुहोस् खेलाडीलाई हेरौं; खेलाडी / अवतार जसले स्क्रिनमा खेलमा भाग लिन्छ। मस्तिष्क सहित हाम्रा शरीर यस बहु-खेलाडी खेलमा अवतार हुन्। हामीले एओ (कृत्रिम बुद्धिमानी) एक बायो-मस्तिष्कसँग अवतार गरे जुन धेरै छ, भावना छ र विकल्पहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ, तर वास्तविक खेलाडी बाह्य छ। तथापि, हाम्रो अवतार, धेरै आक्रामक र ठुलो महसुस गर्छ, जस्तै संसारको जस्तो कि हाम्रो वरिपरि 'भौतिकै' हुन्छ।
के तपाई बिचित्र बयानहरू भेट्नुहुन्छ? यदि तपाइँ भौतिकी नील्स बोहर द्वारा डबल स्लिट्स प्रयोगमा बुझ्नुहुन्छ भने यसमा साबित भएको छ कि यो समस्या केवल अवलोकनमा अवस्थित छ; तपाईंको प्लेस्टेशन टिभि स्क्रिनमा छवि जस्तै तपाईं आफ्नो नियन्त्रक चलाउनुहुन्छ र खेलमा विश्वको समय हेर्नुहोस्।
यस अन्तर्दृष्टिमा आधारित चेतनाको परिभाषा, त्यसपछि हो: बाह्य पक्ष जसले तपाईंको शरीर र दिमागलाई नियन्त्रण गर्छ र तपाईंको मन मस्तिष्कमा लिने छनौटहरू गर्दछ। जागरूकता आउँदैछ लागि मस्तिष्क गतिविधि र लागि प्रत्येक कार्य। कुकुर यो भर्चुअल वास्तविकता को बाहिर छ। जागरूकता छ तपाईं को हुनुहुन्छ। तपाईं चेतना हुनुहुन्छ; तपाईं आफ्नो दिमाग होइन र तिम्रो शरीर होइन। तपाईंको शरीर यो सिमुलेशनमा मात्र अवतार हो।
चेतनाबाट परिवर्तन गर्नुहोस्
त्यसैले परिवर्तनको एक मात्र तरिका चेतनाको स्तरमा राख्न सकिन्छ। यही कारणले हाम्रो असलिकता कसरी परिभाषित गर्ने राम्रो विचार प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाई वास्तवमा बुझ्न जाँदै हुनुहुन्छ कि हामी एक लूसिफरियन बहु-खेलाडी सिमुलेशनमा बस्छौं, त्यसपछि तपाईले देख्नुहुनेछ कि सबै चेतनाबाट गरिन्छ र तपाईंसँग तपाईंको जहाज अराजकता राख्न र त्यो परिवर्तन पनि सम्भव छ नि: शुल्क विकल्प छ। निस्सन्देही, यो मुश्किल छ किनकि यो ठीक छ किनभने यो तथ्य हो कि खेल को बिल्डर स्पष्ट रूपमा पहिचान योग्य छ (लुसिफर) एउटा स्पष्ट लिपि र खेलहरूमा खेलाडीहरू (अवतारहरू) जसले स्क्रिप्ट पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले आवश्यक छ कि धेरै खेलाडीहरूलाई स्क्रिप्टको अनुसार खेल खेल्न रोक्नुहोस्।
सम्भवतः हामी कारण यो सिमुलेशन खेल्छौं। के त्यो कारण हो, मैले वर्णन गर्न खोजे यो लेख, जसमा मैले व्याख्या गर्न प्रयास गरेको छु कि यो सिमुलेशन शायद हाम्रो अस्तित्व ('स्टेम सेल वा जानकारी प्रवाहबाट जसको सबै कुरा सुरु भयो) बाट' क्वांटम फिल्ड 'वा सम्पूर्ण निस्पंदन स्टेम सेलमा भाइरस प्रणाली हो। कृपया त्यो लेख छोटो पढ्नुहोस्।
म यहाँ लेखबाट उद्धरण दिन चाहन्छु:
कंक्रीट कदम लिनुहोस्
यो हाम्रो सबै मानव (अवतार) भावना (सोच) को विरुद्धमा जान्छ जुन हामीले बाहिर बाहिर पस्न सक्ने छनौटहरू बनाउन। यो जहाज अराजकता राख्न सुरक्षा र सुरक्षाको कुनै पनि भावना विरुद्ध जान्छ। आखिर, हामी सोधे कि यदि हामी प्रवाह संग जान्छौं, हामी आफ्नो किरा वा बंधक तिर्न जारी राख्न सक्छौं। हामी सोच्छौं कि जब हामी प्रणालीमा काम गर्न थाल्छौं तब हामी अब हाम्रो परिवारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं र सबै कुरा गुमाउन सक्छौं। हामी सोच्छौं कि हामी यो सोचको साथ समाधान गर्न पर्छौं।
केवल जब हामी हाम्रो अवतार को नियंत्रण र बटन मा "आंदोलनों को खेल" लाई फिर्ता दि्छ तब, हामी उनको खेल को एक बेहतर सिंहावलोकन छ को ठेगाना लगाएगा। कसले तपाईंलाई राम्रो निर्णय गर्न सक्छ: प्लेस्टेशन खेलमा अवतार वा अवतार नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति?
यो चेतना सुन्न सुरु गर्ने समय हो र केवल ती चेतनाबाट कार्य गर्दछ। यसको मतलब हो कि तपाईंले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न रोज्नु र नदीबाट आफ्नो जहाज लिनु भएको छ। यसको मतलब तपाईंले आफ्नो अवतार दिमाग रोक्न र आफ्नो चेतना सुन्नु पर्छ। ध्यान वा सबै प्रकारका अन्य तरिकाहरू जुन तपाईले सोचेमा तपाइँलाई तपाइँको जहाजलाई वर्तमानबाट (रित्तो तिर लाग्नु पर्छ) लिनु पर्छ। यदि यो मामला छैन भने, त्यसपछि तपाईंले सबै चीजको सार छोड्नुभएको छ र तपाईं केवल आफ्नो व्हीलहाउस र डेक जहाज पोषण गर्दै हुनुहुन्छ। ध्यान वा योग (आदि) द्वारा पोलिश तपाईंको स्वच्छ जहाज त्यसपछि ग्याँस तिर लाग्नु हुनेछ।
ट्याग: अवतार, चेतनाको स्तर, बराबर, विशेष, आत्मा, विश्वास, शरीर, समाज, ध्यान, धर्म, अनुकरण, आध्यात्मिकता, प्रणाली, परिवर्तन गर्नुहोस्, योग, आत्मा
3 जुलाई 2019 मा 14: 34
यो कसरी सम्भव छ, अर्थात् पश्चात जवाफ दिन सरल छ, कुनै नैतिक ब्याक बटन छैन र सबै भन्दा सजिलो तरिका छान्नुहोस्। चीजहरु जो सानो रहन मा madurodam ठूलो बनाइयो र यदि चीजें पहिलो नजर मा गलत देखो, वहाँ अझै पनि मुखौटा चीजहरु को लागि एक सफेद विशाल छ। किनकि बगैंचाहरू, हेजहरू र डिसहरू राम्रो बनाएछन्।
प्रिन्सिपलमा कुनै हानि थाहा छैन ..
3 जुलाई 2019 मा 18: 34
मानिसहरू सजग / अनौठो रूपमा जान्दछन् कि तिनीहरू एक विचलित समाजमा बस्छन् जहाँ प्राकृतिक कारणहरू विरुद्ध प्रचारित हुन्छ। तिनीहरूले सरकार द्वारा त्यो क्यान्सर को माध्यम ले जितना संभव छान्छ र किनकि यो झुंड मा भाग जारी राखन को लागि सुरक्षित छ। तपाईं पक्कै पनि यो कपटीको रूपमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं कपालको रूपमा क्यान्सर र व्यवहार पर्याप्त छैन। त्यसपछि असुविधा / अवरोध माध्यमबाट ब्रेक हुन्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ गुरुङ, ध्यान, आदि छन्, जुन वास्तवमा हामी परिस्थितिमा परिवर्तन गर्दैनौं। गुरु को प्रणाली को महत्वपूर्ण छैन, उनि राम्रो र अस्पष्ट छन्, यसैले हरेकले गुरु को मूर्ख मा उनको व्याख्या दिन सक्छन्। ध्यान दोहोर्याउने स्थिति हो जुन स्थिति फोहोर हटाउन र त्यसलाई तपाईंको रुचिमा भाग्न। यो सबै लिपिबाट मान्छे को लागि राम्रो तरिकाले काम गर्दछ। तिनीहरू प्राकृतिक अवस्थाको लागि उत्तरदायी अनुसन्धान र विषयको अधीनमा कहिल्यै हुदैनन्। तिनीहरू धेरै खुसी हुन्छन् कि त्यहाँ गुरुङ, मनन आदि। र यो झुंडको लागि पनि राम्रो छ किनकी उनको टाउको छुटकारा पाउन सक्दैन। सबै पछि, तिनीहरू भेडासँग चुपचाप हिडिरहन्छन्। यो कुनै संयोग छैन कि 'गुरुङ', ध्यान प्रदायक, आदि को अधिकांश भन्दा लिपि पृष्ठभूमि देखि केटाहरु छन्।
क्रिश्चियन वान अफरसन लेखे:
31 जुलाई 2019 मा 14: 54
जर्ज काभिलासले यस बारेमा यसप्रकार कुरा गर्छन्ः तपाईंसँग प्राकृतिक क्रम, देवीदेवताहरूको होलोग्राम, र एउटा टेक्नोलोजिकल होलोग्राम (अन्य चीजहरूको बीचमा सिमुलेशन थ्योरी) छ।
त्यसोभए उसले सिमुलेशन सिद्धान्तमा पूर्ण रूपले परेका मानिसहरूलाई भन्छ कि तिनीहरू यो "टेक्नोलोजिकल होलोग्राम" सँग जोडिएको छ
जे होस्, वास्तविकता यो हो कि यी ओभरलेहरू हुन् र हामी वास्तविक वास्तविकताको मूलमा जडान गर्न सक्छौं जुन एकै समयमा अवस्थित छ।
म कसरी भन्ने छु यो छ:
तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ सिमुलेशनको धेरै स्तरहरू छन्। मेरो विचारमा, लुसिफरियन सिमुलेसन घटनामा मात्र 1 कम छ।
"नकारात्मक लुसिफरियन लेयर" जुन अरू चीजहरूको बीचमा, पृथ्वीको स्तरमा खेल्दछ, र "पॉजिटिभ लुसिफेरियन लेयर" जुन ब्रह्माण्ड हो धेरै परसम्म फैलिएको छ।
दिईएको छ कि ब्रह्माण्ड क्षेत्रका सबै चीजहरू प्राकृतिक क्रम .. नक्कल / आयामबाट नक्कल गरिएको छ, त्यहाँ किन त्यहाँ कुनै कारण छ जुन यो सिमुलेशनले काम गर्ने तरिकामा मूल सत्य छ?
के यो केवल एक ओभरले हो जसले "वास्तविकता" सँग मात्र काम गर्न सक्छ?
31 जुलाई 2019 मा 19: 32
यदि तपाइँ क्वान्टम-शारीरिक व्याख्यालाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने तपाइँले बुझ्नुहुनेछ कि "सिमुलेसन" शब्द मेटाफोरिकल छैन र यो पनि बुझ्नुहुनेछ कि "होलोग्राफिक प्रक्षेपण" को अवधारणा सही छैन (र अधिकमा रूपकको सेवा दिन सक्छ)।
हामी सबै प्रकारका नामहरू जोड्न सक्छौं ... विing्गमेकरहरूबाट जर्ज हप्लेपअपमा वा तपाईं केवल शुद्ध तर्क आफैंमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं अब यसलाई नकारात्मक लसिफेरियन तह र एक ब्रह्माण्डको साथ फेरि होजपज बनाउँदै हुनुहुन्छ।
सबै प्रकारका विचारहरूको मिश्रण (अनुकरण / होलोग्राम) यसलाई जटिल र आध्यात्मिक बनाउँदछ। यो एक भूलभुलैया बनाउँदछ जबकि वास्तव मा सबै चीजको माध्यमबाट हेर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईं बाक्लो पुस्तकहरूको बारेमा तपाईंको सबै सामानहरू पढ्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई सबै सरलतामा बुझ्न सक्नुहुन्छ।
धेरै लेखहरूमा मैले वर्णन गरेको छु कि तपाईं कसरी सिमुलेसनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहिँ सबै भन्दा पहिले राम्रोसँग पढ्नु राम्रो हुन्छ pf लाई जवाफ दिन अघि म्यासलाई निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याउँदैन।
« औसत डचमेनको मानसिकता मृत्यु भएको छ: कमजोर र निष्क्रिय
वास्तवमा ब्रिटिश शाही परिवारको रूपमा रगतको उरुसुला वान ड्रे लेईन (भविष्यको ईयू अध्यक्ष) हो? »
कुल भ्रमण: 11.597.295
मार्टिन भिजल्याण्ड op इन्द्रेणीले कट्टरपन्थी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि समर्थकहरू सोच्दछन् कि उनीहरू 'विविधता र समावेशीकरण' को लागि संघर्ष गर्दैछन्।
guppy op 5G खतरनाक छ र यो कसरी गोप्य रूपमा स्थापित छ